Usoro AulaGEO - Geofumadas
Autodesk Inventor Nastran bụ usoro ịme anwansị dị ike ma sie ike maka nsogbu injinia. Nastran bụ ihe ngwọta maka usoro mmezu nwere njedebe, nke a ghọtara na usoro ọrụ nhazi. Na ọ dịghị mkpa ikwu banyere nnukwu ike nke Inventor na-ewetara anyị maka imepụta igwe. N'ime usoro ihe ọmụmụ a, ị ga-amụta usoro nke ...
Ihe omumu - 3D Model Usoro - BIM MEP Usoro - Ndụ Ndụ Usoro mmepụta
Agụmakwụkwọ 3D - Ọkachamara na ọrụ obodo
AulaGEO na-enye usoro ihe ọmụmụ 4 a kpọrọ "Autocad Civil3D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga - enyere gị aka ịmụ etu esi ejikwa ngwa ọrụ Autodesk a dị egwu ma tinye ya na ọrụ dị iche iche na saịtị ewu. Bụrụ onye ọkachamara na ngwanrọ ahụ ma ị ga-enwe ike ịmepụta ọrụ ụwa, gbakọọ ihe na ọnụ ahịa ụlọ na ...
Usoro ArcGIS Pro - efu ka elu na ArcPy
Wantchọrọ ịmụta otu esi eji ngwaọrụ ndị ArcGIS Pro nyere, malite na ncha? Usoro a gụnyere ihe ndị bụ isi nke ArcGIS Pro; edezi data, usoro nhọrọ dabere na njirimara, na -emepụta mpaghara nke mmasị. Mgbe ahụ ọ gụnyere digitizing, na-agbakwunye ọkwa, tebụl na-edezi na ogidi na àgwà. Ga-amụtakwa imepụta akara ...
Nke a bụ usoro mmeghe nke ngwaọrụ SolidWorks na usoro usoro ihe eji eme ihe. Ọ ga-enye gị nghọta siri ike banyere SolidWorks ma kpuchie ịmepụta eserese 2D na ụdị 3D. Mgbe emechara, ị ga-amụta otu esi ebupụ na usoro maka ibipụta 3D. Ga-amụta: nhazi Cura3D maka mbipụta 3d, ntinye ...
Usoro - Ndụ Ndụ Usoro Nhazi Mechanical
AulaGEO gosipụtara usoro a lekwasịrị anya na mmepe na mmekọrịta nke data gbasara ohere gbasara ntinye nke ịntanetị. Maka nke a, a ga - eji akụrụngwa koodu atọ n'efu: PostgreSQL, maka njikwa data. Nbudata, ntinye, nhazi ihe gbasara oghere (PostGIS) na ntinye nke data gbasara ohere. GeoServer, ka o mee data. Nbudata, nwụnye, okike nke ...
Usoro - Geospatial
CREO bụ 3D CAD ngwọta nke na - enyere gị aka imeziwanye ihe ọhụrụ ị na - emepụta ka ị nwee ike ịmepụta ngwaahịa ka mma ngwa ngwa. Mfe na-amụta, Creo-ewe gị seamlessly si mmalite nkebi nke ngwaahịa imewe site n'ichepụta na karịrị. Nwere ike ikpokọta arụmọrụ siri ike ma gosipụta nke ọma na ihe ọhụụ ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Mọdụl 7
N'ime usoro AulaGEO a, ọ na-egosi otu esi akwadebe ezigbo ọrụ ụlọ nke nwere mgbidi na-ewu ụlọ, na-eji usoro nghazi usoro kachasị ike na ahịa. ETABS 17.0.1 software. A kọwara ihe niile metụtara ụkpụrụ ndị a n'uju: Iwu maka Nwepụta na Mwube nke Masonry Structural R-027. na nke a…
Usoro CSI ETABS - Nhazi usoro - Usoro nkuzi
Nke a bụ nkuzi nke nwere usoro mmụta dị elu na mmepe bara uru nke Mgbidi Masonry Structural. A ga-akọwapụta ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ nke ọma: Iwu maka imepụta na iwu ụlọ Masonry Structural R-027. Nke a ga -akọwa ihe ịtụnanya dịka mmetụta kọlụm dị mkpirikpi, nke etinyere na Masonry Walls na ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Module 5
Site na nkuzi a, ị ga -enwe ike iwulite ezigbo ọrụ ụlọ na Structural Masonry Walls, na -eji ngwa kachasị ike n'ahịa na ngụkọta nghazi ngwanrọ ETABS 17.0.1 A kọwara ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu: Nhazi na iwu iwu nke Ụlọ Masonry Structural R-027. na nke ikpeazụ bụ ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Mọdụl 6
Site na nkuzi a, ị ga -enwe ike ịkwadebe ezigbo ọrụ ụlọ nke nwere mgbidi ụlọ arụrụ arụ ọrụ, na -eji ngwa ngụkọ ihe nhazi kachasị ike n'ahịa. ETABS 17.0.1 Software Ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ ka akọwara nke ọma: Iwu maka imepụta na iwu ụlọ Masonry Structural R-027. a ga -eji nke ikpeazụ atụnyere ...